ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ Archives - Page5of 10 - Pissaya News
အသီးအနှံများဟာ အာဟာရပေါင်းစုံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အရင်း အမြစ်ဖြစ် ပါ တယ်။ အသီးအနှံများမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဖော်လစ်အက်စစ် စတဲ့ အာဟာရ ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ အသီးအနှံတွေစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေက များပြားလွန်းတာကြောင့် အသီးအနှံများများ စားသုံးဖို့တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။ အစိမ်းရောင်အသီးအနှံတွေစားသုံးခြင်းဖြင့် – မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းခြင်း – အူမကြီးကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားခြင်း ကိုလျော့ကျစေခြင်း – ကြွက်သားများ ယိုယွင်းလာမှုကို နှေးစေခြင်း – အသည်းအတွက် အဆိပ်ဖြေပေးသော enzymes များကို ထိန်းညှိပေးခြင်း အနီရောင်အသီးအနှံတွေစားသုံးခြင်းဖြင့် – ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း – အသားအရေ ဖူးယောင်၊ နီရဲတာမျိုးကို လျော့ကျစေခြင်း – နှလုံးကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း – prostate ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း အ၀ါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ရှိသောအသီးအနှံတွေစားသုံးခြင်းဖြင့် – antioxidant ဓာတ်ကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း – မျက်လုံးနှင့်အရေပြားကျန်းမာရေးကို ထိန်းညှိပေးခြင်း – ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်းကို လျော့ကျစေခြင်း အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်ရှိသော အသီးအနှံများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် – အရေးအကြောင်းတွေနှင့် အရေပြားကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း -ရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်း – ကုန်ဆုံးသွားသော antioxidant ပမာဏကို ပြန် လည်ဖြည့် တင်းပေးနိုင်ခြင်း – နှလုံးသွေးကြောများ…
ငုံးဥရဲ့ လူသိမများ⁠သော အကျိုး⁠ကျေးဇူးများ
၁။ ငုံးဥဟာ အာရုံကြော စနစ်ကို ထိန်းပေးပြီး မှတ်ဥာဏ် ကောင်းမွန်စေပါတယ် ၂။ ငုံးဥဟာ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ၃။ အရေပြားနဲ့ ဆံပင် အလှကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အလှကုန် ပစ္ဏည်းတွေမှာတောင် အသုံးပြုကြပါတယ် ၄။ အစာအိမ် အနာကိုလဲ သက်သာစေပါတယ် ၅။ သွေးအားနည်းရောဂါကို သက်သာစေတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးတွေ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ၆။ တီဘီရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် ဆီးချိုသမားတွေလဲ ငုံးဥကို ပုံမှန် စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ငုံးဥ တစ်လုံးမှာ အဆီ 1g , အသားဓာတ် 1g ၊ ဗိုက်တာမင် A ၊ C ၊ ကယ်လ်စီယမ် နှင့် သံဓာတ် တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြက်ဥ တစ်လုံးမှာတော့ ကစီဓာတ် 1g , အဆီ 5g , အသားဓာတ်6g သကြားဓာတ် 1g ဗီတာမင် A ၊ C ၊ ကယ်လ်စီယမ် နှင့် သံဓာတ် တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ Credit – Khin Cho (www.drmyanmar.com)
ဒီလိုဆိုးရွားလှတဲ့ အဆီတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချကြမလဲ?
အဆီ ပိုစားပါ။ အဆီကျအောင် အဆီစားတာ လျှော့ရမယ်လို့ ထင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာ အတွက် ကောင်းတဲ့ အဆီတွေဖြစ်တဲ့ သဘာဝအုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ အစေ့အဆံတွေမှာပါတဲ့ အဆီတွေအပြင် ဆယလ်မွန်လိုမျိုး အဆီများ တဲ့ငါးတွေမှာပါတဲ့ အိုမီဂါ ၃ အင်ဆစ်အဆီဓာတ်တွေဟာ ဗိုက်အဆီကို ကျစေတဲ့အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ကောင်းတဲ့ HDLအဆီဓာတ်ကိုလည်း တက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့ပါ။ နေရောင်မှာပါတဲ့ ဗီတာမင်ဒီဓာတ် ချို့တဲ့နေသူတွေမှာ Cortisol လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေ များလာတတ်ပြီး အဆီခြေဖျက်ရ ခက်ခဲလာတတ်တာကြောင့် နေရောင်ခံပေးသင့်ပါတယ်။ နေရောင်မှာပါတဲ့ ဗီတာမင်ဒီက အဆီတွေကို သူ့အလိုလို ကျဆင်း သွားစေမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ချရခက်နေတဲ့ အဆီ အနည်းငယ်ကိုတော့ ကျဆင်းစေဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချဖို့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပေမယ့် ကြာရှည်စွာ စိတ်ဖိစီးနေသူတွေမှာ cortisol ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုး ထွက်လာပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ကာ အရေးပေါ်သုံးအနေနဲ့ ဝမ်းဗိုက်အဆီစု သိုလှောင်စေပါတယ်။စိတ်ဖိ စီး မှု ကို လျော့နည်းစေနိုင်ဖို့ တစ်နေ့ကို အချိန်5မိနစ်ခန့်ယူပြီး အသက် ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူ၊3စက္ကန့်ခန့် အောင့်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှူထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ တရားထိုင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန် cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင် အလေးတုံးမ,တာပါ ထည့်လုပ်သင့်ပါတယ်။…
ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ ဆံပင်ကို ဆီးနွေးနွေးသုံးပြီး နှိပ်နယ်ပေးလေ့ရှိသူတွေရဲ့ ဆံပင်ဟာ ယင်းသို့လုပ်လေ့ လုပ်ထမရှိတဲ့ ဆံပင်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ဆံပင်ထက် ပိုပြီးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းကာ အမြဲစမတ်ကျနေတတ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် စား သုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ဆံပင်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှဆင်ကြတာတွေဟာ ဆံပင်ကျွတ်စေ၊ ဆံပင်ပါးစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပါ။ ဒီလို ဆံပင်ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ အချိန်နည်းနည်းပေးရုံနဲ့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီ ဒါမှမဟုတ် သံလွင်ဆီနှင့် ဗန်ဒါစေ့ဆီ နှစ်မျိုးကိုရောပြီး ဗီတာမင်အီး ခေါင်းလိမ်းဆီ capsule တောင့် တစ်တောင့်ကိုဖောက်ထည့်ကာ ဆံပင်ကို မိနစ်နှစ်ဆယ်ကြာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးနောက် ရေအေး အသုံးပြုကာ ခေါင်းလျှော်ပါ။ ဆံပင်ကျွတ်တာ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆံပင်ကြမ်းတာ၊ ဆံသား ခြောက်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ရေပူနဲ့ ခေါင်းလျှော်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆံပင်ပျော့ဆေး (Conditioner) ထဲကို ဒိန်ချဉ်၊ ကြက်ဥရောပြီး ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆံသားကို နှိပ်နယ်ပေးပါက ဆံကေသာတောက် ပြောင်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ပျားရည်နဲ့ ဒိန်ခဲကို ပေါင်းစပ်ကာ ဆံပင်ပေါင်းပေးပါက ဆံသားကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှည့်နှစ်လုံး၊ mayonnaise လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ရောကာ အနှစ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ဆံပင်ကိုလိမ်းပေးပါ။ တစ်နာရီကြာထားပြီးနောက် ကြက်သီးနွေးရေဖြင့် ဆေးချပါ။ ဆံသားကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပြီး ဆံပင်မွဲခြောက်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Credit…
မျက်လုံး ခြောက်သွေ့ယားယံတဲ့အခါ မကြာခဏ ပွတ်မိကြပြီး ပိုးဝင်ကာပိုမိုရောင်ရမ်းလာတတ်ကြပါတယ်။ မျက်လုံးလေးကို သဘာဝအတိုင်း စိုစွတ်ချောမွေ့စွာ လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့ မျက်ရည်ထွက်ပေးရပါတယ်။ ချောဆီအနေနဲ့ ထွက်တဲ့မျက်ရည်ဟာ မျက်လုံးလေးကို စိုနေစေပြီး တောက်ပစေပါတယ်။ အပြင်က ၀င်လာတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကိုလည်း ဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပါတယ်။ မျက်လုံးထဲ တစ်ခုခု ၀င်လာရင် မျက်ရည်တွေ ထွက်လာပြီး ၀င်နေတဲ့အမှိုက်ပါ မျက်ရည်လေးနဲ့ ပါသွားတတ်တယ်လေ။ မျက်လုံးလေးတွေ ခြောက်သွေ့ယားယံတာ ဘာလို့လဲ? ● အသက် 65 နှစ်အရွယ် လူကြီးတွေမှာ သဘာဝအတိုင်း မျက်လုံးအစိုဓာတ် နည်းလာတဲ့အတွက် မျက်လုံး ခြောက်သွေ့ယားယံတတ်ပါတယ်။ ● ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲကြောင့် မျက်လုံး ယားလာတတ်ပါတယ်။ ● သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဆေးတွေ ဓာတ်မတည့်တာအတွက် သောက်ဆေးတွေ၊ သွေးကျဆေးတချို့က မျက်လုံး ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ ● သွေးလေးဖက်နာ၊ ကိုယ်ခံအား မူမမှန်ရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောဂါတချို့မှာ မျက်လုံး ယားတတ်ပါတယ်။ ● ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ဒေသတွေမှာ လေပူဒဏ်၊ နေပူဒဏ်တွေကြောင့် မျက်လုံး ခြောက်လာတတ်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ပိုးဝင်ပြီးတောင် မျက်စိကျိန်းဖူးကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ မျက်လုံး ခြောက်သွေ့ယားယံရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ● သဘာဝမျက်ရည်ကို ပြန်လည်ဖန်တီးထားတဲ့ မျက်စဉ်းတစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ Artificial tear လို့ ခေါ်ကြတယ်။ မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ခတ်ပေးပါ။ ● နေကာမျက်မှန် တပ်ပါ။…
၈ လ⁠ကျော်အတွင်း ၁၃၆ ⁠ပေါင်ကျသွားခဲ့သူ
ကျွန်မနာမည် Heather ပါ။ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီး အရပ် ၅ ပေ ၆ လက်မ မြင့်ပါတယ်။ ဒီလို ၁၃၆ ပေါင် မကျခင်တုန်း ကကျွန်မ ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်က ၂၅၄ ပေါင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၀ိတ်လျှော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ကျွန်မမှာ ၂ နှစ်နဲ့ ၄ နှစ်အရွယ် သားလေး ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မသူတို့လေးတွေနဲ့မမောမပန်းဘဲ ကောင်းကောင်းဆော့ ချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မှန်ထဲကြည့်မိရင်တောင် ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မုန်းတဲ့ခံစားချက်ကို လည်း စိတ်ကုန်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေလာရင်း တစ်မနက်ခင်းမှာ အိပ်ယာထဲက ထထချင်း ၀ိတ်လျှော့ဖို့ တစ်ခုခု ကိုကျွန်မလုပ်သင့်ပြီဆိုတဲ့ အသိချက်ကနဲဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ ဒီအသိစိတ်လေးကို အမြဲနှလုံးသွင်းဖြစ်ပြီး ကျန်းမာလှပတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းအားပေးဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မမေ့နိုင်နေ့ရက်များ ပထမဆုံးအနေနဲ့ တစ်နေ့တာလုံးစားသမျှကို စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ဒိုင်ယာရီရေးသလို ရေးမှတ်တဲ့ အကျင့် ကိုပျိုးထောင်ခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ခါတည်း အများကြီးစားတဲ့အကျင့်ကို ရှောင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို နည်းနည်းနဲ့ အကြိမ်ရေများများ စားပေးပါတယ်။ ရေကလွဲပြီး ဘာအချိုရည်မှ မသောက်ဘဲနေ ခဲ့ပါတယ်။ လေ့ကျင့် ခန်းအနေနဲ့တော့ လမ်းလျှောက်တာမျိုးကစပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှအလေး နဲ့ လေ့ကျင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နာကျင်လည်း ရှေ့ဆက်လျှောက်ဆဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တော့…
Compassion Fatigue ဆိုတာ ဘာလဲ? ဖေ့ဘုတ်မှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့အခါ အများသူငှါရဲ့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာတွေ ” ဟယ် … လှလိုက်တာ … ချစ်စ ရာကောင်းလိုက်တာ ” ဘာညာလေးတွေ ကွန်မန့်မှာ မြင်ရတဲ့အခါ စိတ်မချမ်းသာရဘူးလားနော်။ အဲ … ပြဿနာ က အဲဒီ လိုချီးကျူးတာတွေ မကြာခဏခံရတဲ့ ပေါ်ပြူလာတွေဟာ Post မတင်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေဆိုရင် ဘာကွန်မန်မှ ချီးကျူးမှုမှ မရတဲ့ အတွက် ဘဝမှာ တစ်ခုခု လိုနေသလို အမြဲခံစားရပါသတဲ့။ သနားစရာလို့ပဲ ဆိုရမလား … ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ သားကောင် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပါသတဲ့။ ဖေ့ဘုတ်မှာ ပုံလန်းလန်းတွေတင် စာတွေရေး … ဟာခနဲ ဟင်ခနဲဖြစ်စေတဲ့ အကြွားသန်သူတွေမှာ မရောင့်ရဲနိုင်တော့တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ ရလာပါတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ်။ တစ်ခုခု တင်လိုက်တိုင်း ကွန်မန့်လေး ပွတ်ကြည့် လိုက်၊ နိုတီလေး စစ်လိုက်နဲ့ အီးမေးလေး ဖွင့်လိုက်နဲ့ အင်မတန် အလုပ်များနေကြတာမို့ စိတ်ဖိစီးမှု တက်ရသူတွေ ထဲမှာ ကျော်ကြားသူတွေကစလို့ သာမန်လူတွေအထိ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒီဖီစီးမှုဟာ ရေရှည်မှာ ကာယအား၊ ဉာဏအားတွေကို ယုတ်လျော့စေပြီး ကောင်းကျိုးမပေးဘဲ စိတ်ကူးဉာဏ်တွေ နည်းပါးလာစေပါတယ်နော်။ ဘယ်ဖိစီးမှုမှ ကောင်းကျိုးမပေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုချီးကျူးမှုတွေ၊ မြှောက်ပင့်မှုတွေကို အမြဲခံယူနေကျ လူတွေမှာ…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စပ်သောအစားအစာတွေစားဖို့ သင့်တော်ပါသလား? မိခင်ရဲ့အစာအိမ်က ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင် အလွန်အမင်းမစပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပူအစပ်တွေက ကလေးကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ပေမယ့် မိခင်ကိုတော့ အစာခြေလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ပူခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အပူအစပ်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မနက်ပိုင်းမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အော့အန်ခြင်းတွေကိုလည်း ပိုဆိုးစေပါတယ်။ အပူအစပ်အစာများတဲ့နိုင်ငံကမိခင်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလည်း စားနေကျအစားအစာတွေပဲ စားကြပြီး ဒါက ကလေးကိုမထိခိုက်ပါဘူး။ သိမှတ်စရာအချက်များ အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ပါ အချို့အသာအစားအစာတွေကြောင့် ရင်ပူတာတွေ၊ အစာမကြေတာတွေဖြစ်ရင်တော့ ဒီအစားအစာတွေကိုရှောင်ပါ။ အပူအစပ်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေကို သေချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးမှစားပါ အစာမကြေခြင်း၊ ရင်ပူခြင်းတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် အပူအစပ်အစားအစာအသစ်စားမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းချင်းစပြီးစားပါ။ သေချာထုတ်ပိုးထားတာတွေကိုပဲစားပါ။ အထုတ်ပုံစံပျက်နေရင် ညစ်ပတ်နေနိုင်တဲ့အတွက် မစားပါနဲ့။ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးဌာနကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အစားအစာတွေပဲ စားသုံးပါ။ အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ထပ်ပြီးမှာချင်တာကတော့ အပူအစပ်တွေစားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပူအစပ်စားလို့ ရင်ပူမယ်၊ အစာမကြေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အလွန်အမင်းစပ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုတော့ မစားပါနဲ့။ Credit – Dr. Mya Myo Myo Swe www.drmyanmar.com
ကိုယ့်⁠ရှေ့မှာ ဓာတ်လိုက်⁠နေတဲ့သူကို ⁠တွေ့ရင် ဒီလိုအသက်ကယ်ပါ
၁။ လျှပ်စီးကြောင်းရှိတဲ့နေရာမှဝေးသောနေရာသို့ လူနာကိုရွေ့ပါ။ circuit breaker, fuse box (သို့) Outside Switch တို့မှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြတ်တောက်ပါ။မီးမပိတ်နိုင်လျှင် လျှပ်စစ်မစီးကူးနိုင်တဲ့ သစ်သားပြား ၊ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်းရိုး၊ သစ်သားထိုင်ခုံ၊ရာ ဘာခြေသုတ်ခုံတို့ကို အသုံးပြု၍ဓာတ်လိုက်နေသူကို လျှပ်စစ်စီးကြောင်းမှ ဖယ်ထုတ်ပါ။ အကူအညီပေးလာသူရဲ့ ခြေထောက် (သို့) ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းက တစစ်စစ်ခံစားနေရလျှင် ဓာတ်လိုက်နေသူကိုမကူညီသေးဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းစီးနင်းမှုမရှိ တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးနေပါ။ ၂။ လိုအပ်လျှင် CPR ပြုလုပ်ပါ။ အသက်မရှူတော့ရင် (သို့) နှလုံးခုန်ရပ်သွားလျှင် လူကြီးအတွက် CPR နဲ့ ကလေးအတွက် CPR နှစ်မျိုး ထဲကအသက် အရွယ်အပိုင်းအခြားအလိုက် ကိုက်ညီတဲ့ CPR နည်းစနစ်နဲ့ အသက်ကယ်ပါ။ ဓာတ်လိုက်ခံရသူကလူကြီးဆိုလျှင် မိမိ၏လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးရင်အုံနှစ်ဖက်၏ အလယ်၊ ရင်ညွန့်ရိုး အပေါ်မှာတင်ပါ။ ကလေးငယ်ဆိုလျှင် ရင်ညွှန့်ရိုးပေါ်ကိုလက်နှစ်ချောင်းတင်ပြီးဖိပေးရပါမယ်။ မိမိ၏လက်နှစ်ဘက်ကို ဆန့်တန်းထားပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကို မိမိလက်နှစ်ဖက်အပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ လက်ဝါးဖြင့် ရင်ဘတ်ကို ၂ လက်မလောက်ထိနိမ့်သွားအောင် ဖိပေးရပါမယ်။ နံရိုးပေါ်ကို မဖိမိအောင် ဂရုစိုက် ရပါမယ်။ နို့စို့အရွယ်ကလေးတွေကိုတော့ ၁ လက်မလောက်သာနိမ့်သွားအောင် ဖိပေးရပါမယ်။ နှစ်လက်မခန့်ကျသွားအောင်ဖိပြီးပါကလက်ကိုလုံးဝကြွလိုက်ရပါမယ်။ တစ်မိနစ်လျှင် အကြိမ် ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ ရင်ဘတ်ကိုအကြိမ် ၃၀ ဖိပေးရပါမယ်။ တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်ကြား ရင်ဘတ်မို့လာတဲ့အချိန်ကို ခဏစောင့်ပေးရပါမယ်။ အသက်ရှူပြီလားဆိုတာကိုလည်းအမြဲသတိထားကြည့်ရပါမယ်။ အသက်မရှူလာမချင်း CPR ပြုလုပ်ပေးပါ။ CPR ပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူဆိုရင်တော့လူနာ၏ခေါင်းကို မော့ပေးခြင်း၊…
အစာအိမ်ရောင်ရောဂါဆိုသည်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစာအိမ်နံရံရှိအချွဲမြှေးလွှာများ ပျက်စီး၍ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ခြင်း ကိုဆိုလိုပါသည်။ အစာအိမ်ရောင်ခြင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများ ၁. အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း ၂. အရက်သေစာအလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း ၃. ဆေးလိပ်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း ၄. အစားအသောက်အချိန်မမှန်ခြင်း ၅. စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ၆. H.pylori ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း အစာအိမ်ရောင်ရာတွင် ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း နှင့် နာတာရှည်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း ဟူ၍ ၂မျိုးရှိပါသည်။ ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောင်ခြင်းဖြစ်စေသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ၁. အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသည် အစာအိမ်နံရံပေါ်ရှိ အချွဲမြှေးလွှာများကိုကောင်းမွန်စေရန်ထိန်းသိမ်းပေးသော Prostagladins ကိုနည်းစေခြင်းအားဖြင့် အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ ၂. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့် အစာအိမ်တွင်းရှိအစာချေရည်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အစာအိမ်နံရံကိုကာကွယ်ပေးသော အချွဲများထုတ်လုပ်မှုကိုနည်းစေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အချွဲမြှေးလွှာများကိုကောင်းမွန်စေရန်ထိန်းသိမ်းပေးသော Prostagladins ကိုနည်းစေခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း အစာအိမ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ ၃. အစားအသောက်အချိန်မမှန်ခြင်း နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ရုတ်တရက်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများ – ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာဖြစ်ခြင်း – ပျို့ ခြင်း – အော့အန်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ နာတာရှည်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း နာတာရှည်အစာအိမ်ရောင်ခြင်းသည် ၁) H.pylori ရောဂါပိုးကြောင့်လည်းကောင်း ၂) မိမိ၏ခုခံအားကမိမိခန္တာကိုယ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ၁) H.pylori ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်လျှင် နာတာရှည်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၏၈၀ရာခိုင်နှုန်းသည် H.pylori ရောဂါပိုးအစာအိမ်တွင်း၌ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ H.pylori ရောဂါပိုးသည် Urease ဟုခေါ်သော enzyme ဓာတ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အစာချေရည်ထုတ်လုပ်မှုကိုနည်းစေပြီး အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။ ၂) နာတာရှည်အစာအိမ်ရောင်ခြင်း၏၂၀ရာခိုင်နှုန်းသည် မိမိ၏ခန္တာကိုယ်ခုခံအားက အစာအိမ်တွင်းရှိအစာချေရည်ကိုထုတ်လုပ်ပေးသော parietal cell များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့် အစာအိမ်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။…